BAYAAN KU SAABSAN KALA XADAYNTA DEGMOOYINKA IYO GOBOLADA PUNTLAND | PUNSAA
BAYAAN KU SAABSAN KALA XADAYNTA DEGMOOYINKA IYO GOBOLADA PUNTLAND
by admin | Jan 7, 2018 | Warka | 0 comments
Markii la asaasay Puntland sanadkii 1998 dii, waxay ka koobnayd 5 gobol iyo 21 degmo haddana waxay maraysaa 9 gobol iyo 47 degmo. Dhammaan degmooyinkaas iyo gobolladaaas la soo kordhiyey laguma dhisin shuruudaha looga baahan yahay degmo ama gobol ee waxa ay ku dhisan yihiin Qancin-Beeleed, loomana samayn wax xaduuda ah.
Degmooyinka cusub waxa ay tuulooyin markii hore u ahaayeen degmooyinkii hore, iyadoo sidaas oo kale gobolada cusubi ay degmooyin u ahaayeen goboladi hore. Waxa ka dhashay dhibaatooyin badan oo aan markii hore jirin oo ay ka mid yihiin:
dadkii wada deganaa oo kala faquuqma oo qoloba degaan gaar ah loo asteeyey,
khilaafaad xagga lahaanshaha dhulka ah,
Muran xagga maamulka reer miyiga oo daaqa iyo ceelashaha biyaha kala sheegta.
Waxa kale oo ay arintani lid ku tahay hawlihii demoqaraadiyeynta, isdhexgalka bulshada, wax wada lahaanshaha iyo Qorshaynaha horumarineed ee dalka.
Waxay koox howleedyada PUNSAA u qaabilsan helitaanka Dawladnimo loo dhan yahay (Inclusive Governace Thematic Working Group) ay magaalooyinka ka mid ah Puntland ku qabteen kulamo looga hadlayey xuduud u kala samaynta Degmooyinka, Tuulooyinka, iyo Gobolada Puntland.
Dalladda Daneeyayaasha Aan Dawliga ahayn ee PUNSAA waxa ay u aragtay in ay lagama maarmaan tahay in arintan laga hadlo oo aan la dhayalsan. Kulankii ugu dameeyey oo looga wada tashanayey xad u kala yeelidda degmooyinka iyo gobolada iyo waafajinta shuruudaha laga doonayo degmo iyo gobol waxa magaalada Garoowe lagu qabtay Bisha Janaayo 4-5, 2018.
Waxa ka soo qaybgalay masuuliyiin ka kala socdey Wasaaradda Arimaha Gudaha ee Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah oo ay ka mid yihiin aqoon yahanno, culumaaudiin, odayaal, ururrada haweenka, ururrada dhalinyarada, saxaafadda iyo ganacsatada.
Kulankaas oo si weyn loogu gorfeeyey xogta la xiriirta arimaha xuduud- u kala sameynta degmooyinka iyo gobolada iyo saamaynta aan wanaagsanayn ee ay bulshada ku soo kordhiyeen, iyadoo ay ka qayb galayaashu soo bandhigeen dhacdooyin la xariira dhibaatooyin ka jira dhanka xadduudaha degmooyinka iyo gobolada Puntland ee ka dhashay degmooyinka iyo gobolada cusub.
TALO SOO JEEDINO
Si xal loogu helo dhamaan dhibatooyinka waxa shirka wada-tashigu isku raacay:
DAWLADDA PUNT LAND:
In wasaarda arimaha guduhu ay samayso xog ururin kusaabsan kala xadaynta degmooyinka iyo gobolada si loo ogaado goobaha ugudaran ee ay dhibaatadani kajirto.
In la sameeyo wacyi gelin ballaaran oo ku saabsan arimaha xudduudaha degmooyinka iyo gobollada Puntland.
In Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Puntland ay masuul ka noqoto dardar gelinta maareynta hawlaha xadaynta degmooyinka iyo gobolada ee Puntland lana joojiyo magacaabidda degmooyinka iyo gobolada cusub ee ku salaysan qancin-beeleedka.
Shirka wada tashigu wuxuu soo jeedinaynaa in dawladdu dejiso siyaasad iyo qorshe cad oo ku saabsan xaaladda xadaynta xadduudaha degmooyinka iyo gobollada Puntland.
Inay dawladdu soo saarto xeerar kala xadaynaya degmooyinka iyo gobollada Puntland oo ku salaysan shuruudaha degmooyinka iyo gobolada buuxin kara.
Inay dawladdu si dhaqso ah u magacawdo guddi madax bannaan oo ka shaqeeya arimaha xadduudaha oo ka kooban dawladda iyo bulshada rayidka ah.
In lahelo dadkii aqoonta u lahaa, xuduudihii horey ujirey ee dowaldii hore ee somaliya taladana laga qayb geliyo .
Ka qayb galayaasha shirka wada tashigu waxay soo jeediyeen in bulshada hubka laga dhigo, dib u heshiisiinna loo sameeyo, dadkana la diiwaan geliyo si loo gaaro himilada aan higsanayno.
in la joogteeyo kulamada wadatashiga ah ee laxirrira xuduudaynta degmooyinka iyo gobolada puntland.
BULSHADA RAYIDKA AH:
Bulshada rayidka ah wuxuu shirku usoo jedinayaa in ay garab istaagaan dawladda gacana ku siiyaan sidii looga miro dhalin lahaa hawshan kala xadaynta degmooyinka iyo gobolda ee muhiimka ah
Shirku waxa uu ka codsaday Beesha caalamka inay ku deeqaan farsamo iyo waxii tasiilaad
ah ee looga baahdo hawlaha xuduudeynta gobolada iyo degmooyinka.
Dhinaca kale waxa shirka lagu bogaadiyay DALLADDA PUNSAA doorka ay mar walba ka qaadato fududeynta wada tashiga, maaraynta dhibaatooyinka iyo sii odorosidda dhacdooyinka khatarta ku ah ammaanka ummadda.
Gudoomiyaha Bulshada Rayidka Puntlnad
Faysal Axmad Warsame
war murtiyeed ku saabsan Guddiga Ganacsatada Puntland oo Garowe u yimid in ay daneeyayaasha Puntland la wadaagaan Caqabado soo foodsaray Ganacsiga iyo dhaqaalaha Puntland 29 NOV 2017